Archive du 20181228
Hentitra ny K25 « Tena niandany tamin-dRajoelina ny CENI »
Tontosany ny di-dohan’ny CENI namoaka ny valim-pifidianana na mbola manana hatramin’ny 1 janoary 2019 aza izy ireo, raha ny lalàna arahina.
Governemanta Malagasy Miala sasatra ?
Miatrika kihon-dalana lehibe ny firenena ankehitriny kanefa fantatra fa miala sasatra ny governemanta Malagasy. Andraikitra voalohany sahaniny anefa ny fanomanana sy fikarakarana fifidianana mangarahara, milamina ary eken`ny rehetra.
Hosoka tamin’ny fifidianana Mbola sahy manadio tena ihany ny CENI
Nandritra ny fanambarana tamin’ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana filoham-pirenena vonjimaika omaly no nanambaran’ny filohan’ny CENI Hery Rakotomanana fa tsy nanana solotena teny amin’ny biraom-pifidianana rehetra ny CENI, satria tsy tondroin’ny lalàna sy maintsy hanao izany izy.
Fifidianana tsy ara-drariny Miandry izay hevitry ny FFKM ny rehetra
Mitebiteby fatratra ny vahoaka ary raha izao no mitohy, ahiana hikorontana ny samy Malagasy ka fotoana hiantsoana ny raiamandreny am-panahy toy ny FFKM ny vanim-potoana toy izao, hoy ny resaky ny olom-pirenena etsy sy eroa.
Fifidianana filoha Ravalomanana no mpandresy…
Mipoitra ny porofo samihafa mampiseho ny hosoka sy halatra nokotrehin-dRajoelina ny hahazoana fahefana. Raha lalao madio sy tsy nisy halatra io, mazava ny lalan’i Marc Ravalomanana hahazo indray ny toeran’ny filoham-pirenena rehefa nosomparana tamin’ny taona 2009.
Randriamarolaza Louis-Paul Tokony hampiseho fahendrena ireo kandida mianaka
Manoloana ny savorovoron-tsaina mahazo ny Malagasy maro eo am-piandrasana ny voka-pifidianana fihodinana faharoa notontosaina teo amintsika dia nivoaka tamin’ny fahanginany Atoa Randriamarolaza Louis-Paul filoha nasionalin’ny antoko Grad Iloafo ka nanambara fa tokony hampiseho fahendrena ireo kandida mianaka manoloana ny zava-misy ka hahay hifanaraka tsara.
Tsy mitaintaina be ve isika izao e ?
Dia ahoana ry Jean kely aa! Hitako tena tsy nahazo aina mihitsy ianao omaly iny an! Ahoana moa ny akama no terenao ho tonga any nefa efa fantatrao izao fa tsy ankatoaviny iny revy omaly iny? Koa raha tsy azonao ajabaka daholo ary ity olona rehetra ity ry Jean kely aa!
Haino aman-jery sahy milaza ny marina Hatao fahirano raha lany Rajoelina ?
Ampanantsoina eny amin’ny Commissariat Central de La Ville d’Antananarivo eny Tsaralalana ireo tompon’andraikitra eo anivon’ireo gazety vokarin’ny RLM Commmunication anio amin’ny 9 ora maraina.
Sendikan’ny Mpiasan’ny JIRAMA Tsy manaiky ny fandroahana tsy ara-drariny
Nanao fanambarana tetsy amin’ny Hotely Sokhotel Antsakaviro ny Sendikan’ny Mpiasan’ny JIRAMA eto Madagasikara (SEMM) omaly alakamisy 27 desambra.
Kraoma Malagasy Tafapetraka ihany ny tale jeneraly vaovao
Tontosa tsy nisy fifanatrehan`ny mpiasan`ny orinasam-panjakana Kraoma sy ny solotenany ny fifamindram-pahefana teo amin`ny tale jeneraly teo aloha, Terji Rakotondrazafy, sy Jaobarison Randrianarivony, izay tale jeneraly vaovao.
Randriamamiarizafy Ignace Nisalotra ny diplaoma « Doctorat en Géographie » omaly
Taorianan’ny fanohanana ny vokatry ny fikarohana nataony voarakitra anaty boky misy 240 pejy, teny amin’ny Alsh « Domaine Arts Lettres et Sciences Humaines », teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo omaly alakamisy 27 desambra 2018,
Foot à 6 – The Best Fans 2 Abel Anicet no nanokatra azy ofisialy
Tonga nanome voninahitra manokana ny fanokafana ofisialy ny hetsika baolina kitra an’olona 6 “The Best Fans” andiany faha-2 karakarain’ny Gasyfoot eny amin’ny kianja sentetikan’Andohalo tamin’ny alahady
Fasana hilevenan’ny firenena !
Nivoaka iny ny valim-pifidianana vonjimaika ka eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny baolina manomboka eto.
Orinasa Telma Nahatsangana tranombarotra miisa 68
Namoaka ny tomban’ezaka vitany tao anatin’izao taona 2018 izao omaly ny avy eo anivon’ny orinasam-pifandraisana Telma. Isan’ny zava-dehibe tontosa tamin’ity taona ity, raha ny fanazavana, ny fitsanganana tranombarotra na Shop Telma miisa 68 manerana an’i Madagasikara.
NITSABAKA NY FRANTSAY
Tsy nivoaka akory ny vokatra ofisialy avy amin’ny CENI omaly dia efa nandeha tamin’ny onjam-peon’ny Radio France Internationale (RFI) izany.
HAFARI Malagasy Hatomboka amin’izay ny fanamboarana ilay “cité” 160 isa
Hibanjina ny ho aviny amin’izay ny fikambanana HAFARI Malagasy tarihin’ny filohany nasionaliny Rafanomezantsoa Jean Nirina manomboka amin’io taona vaovao 2019 ho avy io. Somary nisedra olana kely mantsy ny fikambanana tamin’ity taona 2018 ity noho ny
Hain-trano tetsy Antohomadinika atsimo Nanampy ireo traboina ny fanjakana
Tafakatra 500 isa mahery hatramin’ny omaly maraina ireo traboina tsy manan-kialofana etsy amin’ny Fokontany Antohomadinika Atsimo, sektera fahadimy. Raha tsiahivina kely dia afaka omaly tokony ho tamin’ny 01 ora sy sasany folakandro no nitrangan’ny loza.